Ngwa 3 iji hazie ọrụ gị | Bezzia
Ngwa 3 iji hazie ọrụ gị
Maria onyekwere | 13/10/2021 10:00 | Nwanyi Executive
Ma ị na -arụ ọrụ na mpụga ụlọ dị ka a ga -asị na ị na -arụ ọrụ telefon Anyị ji n'aka na ị ga -enwe mmasị ịmara ngwa ndị anyị na -atụ aro taa iji hazie ọrụ gị. Ma ọ bụ ya enwere ọtụtụ ọrụ na -eju anyị anya kwa ụbọchị Ọ bụghịkwa mgbe niile ka anyị nwere ngwa ọrụ dị mma iji mee ya.
Ịhazi ọrụ kwa ụbọchị, ijikwa ọrụ na ịgbasa ọrụ site n'ikekọrịta ọrụ n'etiti ndị ọrụ ibe gị bụ ihe ga -adịrị gị mfengwa iji hazie ọrụ gị nke anyị na -agwa gị okwu taa. Ị nwekwara ike ịwụnye ha na ekwentị mkpanaaka gị, kọmputa gị na iPad gị, maka nkasi obi ka ukwuu. Chọpụta ha!
Todoist na-bụ ngwa njikwa ọrụ Site na iji atụmatụ dị mfe na -enyere gị aka nwetaghachi idoanya na udo nke uche gị site na iwepụ ọrụ niile n'isi gị ka itinye ha na ndepụta n'agbanyeghị ebe ịnọ ma ọ bụ ngwaọrụ ị na -eji.
Nke a bụ kalenda zuru oke, ndepụta ọrụ yana ngwa ndetu nke na -enye gị ngwaọrụ enweghị oke iji hazie ọrụ na mmemme gị. Ị nwere ike were ha site na oru ngo, akara na ọkwa dị mkpa, yana ikenye ha ụbọchị ma ọ bụ oge ma ọ bụrụ na ha bụ ọrụ ugboro ugboro. Yabụ na ị ga -enwe echiche doro anya nke ihe niile ị ga -eme oge niile, ị gaghị echefu ọrụ ndị kacha mkpa.
Site na ngwa a, ị nwekwara ike ime ka usoro ọrụ gị dị mfe na -ejikọ ya na faịlụ gị, email na kalenda gị. Ngwa a na -enyekwara gị aka ijikwa nnukwu ọrụ site n'ikwe ka ị kewaa ha ma kenye ndị otu ndị ọzọ ọrụ. Kewaa ma merie ọrụ gị kwa ụbọchị na ọrụ ịkekọrịta!
Imirikiti njirimara ndị a dị n'efu, mana ị nwere ike nweta ihe ndị ọzọ bara uru ịdenye aha na akaụntụ Pro (€ 3 / ọnwa) ma ọ bụ Azụmaahịa maka ndị otu (€ 5 / ọnwa). Ndị a na -enye gị site na nzacha omenala gaa ndebiri oru ngo na ọnụ ọgụgụ nrụpụta, n'etiti akụkụ ndị ọzọ.
Echiche na ntụsara ahụ, Evernote ga -enyere gị aka ijikwa na hazie ọrụ gị. Site na ngwa a ị nwere ike ịmepụta ndepụta ihe ị ga-eme, ịhazi oge na kalịnda, otu ma weghara echiche n'ụdị dị iche iche yana ọbụlagodi digitize akwụkwọ gị site na igwefoto site na ekwentị gị.
Iji mee ka iji ngwa ahụ dịrị gị mma, ị nwere ike jikọta otu akaụntụ Evernote na ngwaọrụ gị dị iche iche: mobile, kọmputa na mbadamba. N'ụzọ dị otu a, ị ga -edobe ozi dị mkpa mgbe niile: a na -emekọ ihe edeturu gị na ngwaọrụ gị niile. Ihe edeturu, n'ụzọ, nke ị nwere ike itinye ederede, onyonyo, ọdịyo, nyocha, faịlụ PDF na akwụkwọ.
Mepụta na kenye ọrụ n'ime ndetu gị ụbọchị ruru, ọkwa na ihe ncheta ka ihe ọ bụla ghara ịgbanarị gị wee mụbaa arụpụta gị! Ị nwere ike jiri atụmatụ efu ya mee ya ma ọ bụ jiri atụmatụ nkeonwe ma ọ bụ nke ọkachamara, maka € 6,99 na .8,99 XNUMX kwa ọnwa, n'otu n'otu.
Trello bụ ngwa ochie maka njikwa oru ngo nke na -abawanye uru dịka telecommuting mere. Ndepụta na kaadị bụ ogidi nhazi nke etinyere bọọdụ nke ngwa a.
Kenye ọrụ, tọọ oge a kara aka, lelee oke arụpụtaghị ihe, tọọ kalenda na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ka ị hụ usoro ọrụ ka mma. Kaadị Trello na nzukọ bụ otu ihe, ka ha si enye ohere jikwaa, nyochaa ma kekọrịta ọrụ site na mbido ruo na njedebe. Mepee kaadị ọ bụla iji chọpụta gburugburu ebe ndebanye aha, ụbọchị ruru, mgbakwunye, mkparịta ụka na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na Trello bụ onye nhazi aka nke aka, ọ na -eji ya arụ ọrụ nke ọma. Nyochaa ihe omume otu gị ịrụ ọrụ na inwe ike ịhụ ka kaadị si aga n'etiti ndị otu dị iche iche ruo mgbe emechara ha bụ ihe ị nwere ike ime ọbụlagodi na akaụntụ efu gị. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ karịa, ị nwere ike were atụmatụ nke adịchaghị mma, dị mma maka otu ndị ruru mmadụ 100 ga -elekọta ọtụtụ ọrụ.
Ma ị na-arụrụ onye ọzọ ọrụ n'ọfịs ma ọ bụ site n'ụlọ, dị ka a ga-asị na ị na-arụrụ onwe gị ọrụ ma ọ bụ na-akwụghị ụgwọ. Ngwa ndị a iji hazie ọrụ gị nwere ike ịkwado ụbọchị gị kwa ụbọchị. Ma ha niile nwere ọgụgụ isi, nwalee ha!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Nwanyi Executive » Ngwa 3 iji hazie ọrụ gị
Otu esi eme ezigbo akpụkpọ ihu na ahụ n'ụlọ